Usayizi 31.74 MB
Okwe FSX uhlobo oluhambisanayo Chofoza lapha
Rikoooo iyaziqhenya ukwethula edume P-3C Orion izindiza zempi abalingisa by Team FS KBT.
I Lockheed P-3 Orion kuyinto eligudle ugu patrol ndiza, bendiza ezine-engined lwenteke emhlabeni wonke. I P-3 Orion kuyinto esuselwe lempi ehlongozwayo ndiza civil Lockheed L-188 Electra yasala dengwane. (Source: Wikipedia)
Superb add-on nge abanikeze asebenza nabo amahle virtual, inkambiso imisindo, amamodeli we high kanye indlela yokwenza eziningi ezifana Navy kanye Canadian Air Force, enengqondo imodeli indiza. Izinguqulo Three ayatholakala, kuhlanganise nalabo ngaphandle abanikeze asebenza nabo virtual for ukucupha ezincane. Ngaphezu kwalokho, le izindiza uyoletha ezinye lezimanga, ezifana amabhomu zaconsa, kanye nezinye izici ezikhethekile, it has konke futhi kumahhala.